जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले परीक्षणको मात्रा र अस्पतालको प्रभावकारिता बढाउन सुझाव दिए । लकडाउन गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले पहिला पनि लकडाउन गरेको हो । तर त्यसबीचमा जुन ढंगले सरकारले काम गर्‍यो । त्यसबेला समय त्यत्तिकै खेर गयो । सरकारले कामै केही गरेन’, ठाकुरले भने,– ‘लकडाउन थपेरमात्रै समाधान होइन । सरकारको योजना पनि के छ ? । दुई हप्ता थप्ने र भोलि पनि अवस्था उस्तै रहे के हुन्छ ? यसबारे सरकारले के सोचेको छ ? ’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट